ShweMinThar: လက်တွေ့ကျကျ ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်လိုစားရမလဲ ???
လက်တွေ့ကျကျ ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်လိုစားရမလဲ ???
( ကျား၊မ - the BEST way to bulk)
ကြွက်သားတက်လာဖို့၊ ပြည့်လာဖို့ အတွက် အစားအသောက်ကို အခုစားနေတာထပ် ပိုစားရမယ်ဆိုတာကို သင်ဟာလက်ခံထားဖို့လိုပါတယ်။ ကြီးလာတာ၊ ပိန်သွားတာ၊ ဒီအတိုင်းတန့်နေတာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းထပ် အစားအသောက် ပမာဏနဲ့ ဘာတွေစားလဲဆိုတာက အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ဒါကို အဓိက အခြေခံဗဟုသုတအနေနဲ့ လက်ကိုင်ထားပြီး ဆက်သွားရမှာပါ။
Golden_Dreams က ဆောင်းပါးတွေ ပုံမှန်ဖတ်သူတွေတော့ မဖြစ်လောက်ပေမယ့် တစ်ချို့ လူတွေ အထင်မှားတတ်တာရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ ပိန်သွားအောင်လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကတစ်မျိုး၊ ကြွက်သားပြည့်လာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းကတစ်မျိုး၊ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာလုပ်လိုက်တာနဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုး။ ဒီလိုလူတွေက လေ့ကျင့်ခန်းပဲလုပ်လိုက်ရုံနဲ့ အိုကေပြီ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို အတွေးမျိုးရှိနေရင် တစ်ခါထဲပြင်ဖို့ ဒီဆောင်းပါးကနေပြောလိုက်ပါရစေ။ Diet စားပုံ စားနည်းကို မပြောင်းသရွေ့ ဘယ် လေ့ကျင့်ခန်း Program ကမှ သင့်ကို သင်လိုချင်တာ ရစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကဲ ဒီအချက်ကို လက်ခံရင် ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို စလိုက်ရအောင်။
" ကြွက်သားတက်ချင်တာလား၊ စားသာစား။ တမုန်းစားပြီး အလေးမ။ တစ်လကို ၅ပေါင်လောက်တက်အောင်စား "
ဒါမျိုးက ရပ်ကွက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ Gym ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အချင်းချင်း အကြံပေးတတ်တာမျိုးပါ။ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပေမယ့် Golden_Dreams ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မှန်သင့်သလောက်မှာ ရပ်မနေသင့်ဘူးမလား။ ဒါဆို အကောင်းဆုံး လက်တွေ့ကျကျ ကြွက်သားတင်တဲ့ နည်းက ဘာလဲ ဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင်။
ကြွက်သားတက်လာဖို့၊ ပြည့်လာဖို့ အဓိက အချက်သုံးချက်လိုပါတယ်။ သင်ဟာ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ဒီအချက်တွေကို လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မိန်းကလေးမလို့ မတူဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဘာတွေလဲဆိုတော့
- ကြွက်သားတက်အောင် လှုံ့ဆော်မှု
အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကြွက်သားတက်ဖို့ ပထမဆုံး အဆင့်ကနေစလိုက်ရအောင်။ ဒါကတော့ Bodyweight လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ဖြစ်၊ အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ဖြစ် ဆော့တဲ့အခါ ကြွက်သားတွေ ပြတ်တောက်မယ်။ ကြွက်သားတွေကို ဒီလို စိန်ခေါ်မှုတွေကို နောင်အခါမှာ ပိုလုပ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုထပ်ပြီး ပြင်ဆင်ဖို့ လိုမယ်ဆိုတာ အချက်ပေးမယ်။ ဒါနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အစာတွေစားတဲ့အခါ ပိုသန်မာပြီး လုပ်နိုင်သွားမယ်။ ဒီအခါ ထပ်ပြီး ဒါ့ထပ်ခက်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှုပေးမယ်။ လွယ်လာလေ၊ ပိုခက်လာအောင် လုပ်လေ။ ဒီလို လှုံ့ဆော်မှုမျိုးလိုပါတယ်။ လုပ်နေကျတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဒါကြီးပဲ လုပ်မနေသင့်ပဲ အမြဲ ပိုစိန်ခေါ်နေရမယ်ပေါ့။
အိုကေ။ ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးလို့ ပထမအဆင့် အချက်ပေး Signal ရပြီ။ ဒီအချိန်မှာ အစားအသောက်၊ အာဟာရတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ပါတော့ ဆိုတဲ့ Signal ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ သင့်ဘက်ကလုပ်ရပါမယ်။ အဆီကျအောင်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည့်လာအောင်လား အပေါ်မူတည်ပြီး သင်ဟာလိုအပ်တဲ့ အစားအစာကို ဖြည့်စွက်ရမယ် မဟုတ်လား။ ဒါ့ကြောင့် ကြွက်သားတွေကို စိန်ခေါ်ပြီးရင် ပြီးပြီ။ အစားအစာက အရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီး ဂရုမစိုက်သရွေ့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်လို့ ဆိုတာပါပဲ။
အဆီကျဖို့ ဘယ်လိုစားရမလဲ ဆောင်းပါးတွေ ရေးပြီးတာမလို့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကြွက်သားတက်ဖို့ ဘယ်လိုစားရမလဲ ဆိုတာကို အောက်မှာ အကျယ်ရှင်းပြပါမယ်။
ဒါကတော့ ဘယ် Program၊ ဘာအတွက်ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသာမန် လှုပ်ရှားမှု၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အရေးပါတာ ငြင်းမရဘူးဟုတ်။ အိပ်စက်ချိန်၊ နားနေချိန်ဟာ ကြွက်သားတွေ အမှန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေချိန်မလို့ မရှိမဖြစ်ပဲပေါ့။ တစ်နေ့ ၇နာရီကနေ ၉နာရီအထိ အိပ်တာအကောင်းဆုံးမဟုတ်လား။
ဟုတ်ပြီ။ အပေါ်က အခြေခံအချက်တွေကို နားလည်ရင် လုပ်နေပြီဆိုပါစို့။ ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့ ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်နကြိမ်၊ ဘာလေ့ကျင့်ခန်း၊ ဘယ်လောက်လေးလေး လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဆောင်းပါးပေါင်းများစွာ Page ထဲမှာ ရေးပြီးပါပြီ။ မဖတ်ရသေးရင် ၀င်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို အခုအကြိမ်က ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အစားအသောက် အကြောင်း ရောက်လာပြီမလို့ ရပ်ကွက်ထဲက စကားတွေအစား လက်တွေ့ကျကျသိဖို့ စလိုက်ကြရအောင်။
ဘယ်လိုလူတွေ စပြီး ထုတင်သင့်သလဲ ???
ပြည့်လာအောင်၊ ကြွက်သားတက်လာအောင် လုပ်တယ်ဆိုကတည်းက သင်ဟာ အတော်အသင့် ပိန်နေသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ အရှင်းကြီးပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ ၀နေသူဆိုရင် ဘယ်သူမှ ထပ်ဝအောင် မလုပ်ချင်ဘူးမဟုတ်လား။
ဟုတ်ပြီ၊ ပိန်နေသူဆိုတော့ ဘယ်လောက်ပိန်ရမလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ပိန်နေသူမှ စပြီး ထုတင်သင့်သလဲ ???
ဘာ့ကြောင့် ပိန်နေသူမှ ထုတင်သင့်သလဲကို အရင်ကြည့်ရအောင်။ ထုတင်တယ်ဆိုတော့ အမှန်က Weight gain ပါပဲ။ Weight တက်လာတာဘာလဲဆိုတော့
Weight = Muscles + FAT ပေ့ါ။
ဘယ်သူမှ အလေးချိန်တက်လာတာကို ကြွက်သားပဲသက်သက်ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အလေးချိန်တက်လာတာရဲ့နောက်မှာ ကိုယ်ထိန်းရင် ထိန်းနိုင်သလို၊ Diet ကောင်းရင် ကောင်းသလို အများစုက ကြွက်သားဖြစ်ပြီး အဆီပမာဏ နည်းနည်းပဲတက်လာတာဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ့် Diet မကောင်းရင် ကြွက်သားတက်တာနည်းပြီး အဆီတက်လာတာများတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အဆီတက်လာတာ အနည်းအများရှိမှာမလို့ သင်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာ အတန်အသင့် ပိန်နေဖို့လိုပါတယ်။ အခုအချိန်ထဲက ၀နေရင် နောင်ပိုပိုဝလာမှာပါပဲ။
" ပိုပိုဝလာတော့ ဘာဖြစ်လဲဗျာ။ ပြီးရင် ပြန်ချမှာပေါ့။ "
ဒီလိုလုပ်သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကောင်းတဲ့ အချက် ၂ခုရှိတယ်။
- ၀လာလေ အာဟာရ စုပ်ယူမှု မကောင်းလေ
ခန္ဓာကိုယ်က စားလိုက်တဲ့ အာဟာရတွေကို စုပ်ယူပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှလေ့ရှိပါတယ်။ Protein ဆိုဘယ်သွား၊ Carbohydrate ဆို ဘယ်သွား စသဖြင့်ပေါ့။ ၀လာလေ ဒီလုပ်စဉ်တွေက မကောင်းတော့လေပါပဲ။ အကျယ်တော့ မရှင်းတော့ဘူးနော်။
- ပြန်မချတက်ရင် တင်ထားတဲ့ ကြွက်သားပါ ပြန်ကျသွားခြင်း
တင်ရင်းနဲ့ ၀လာလို့ အဆီပြန်ချဖို့ ကြိုးစားပြီဆိုပါစို့။ တအားဝလေ၊ ကြာကြာပြန်ချရလေပါပဲ။ ဘာလို့ မြန်မြန်မချပဲ အချိန်ဆွဲပြီး တဖြေးဖြေးချရလဲဆိုတာက မြန်မြန်ချရင် အဆီအပြင် ကြွက်သားပါ အများကြီး ရောကျသွားလေ့ရှိလို့ပါပဲ။
ဥပမာအနေနဲ့ 60kg ကနေ 80 kg တင်လိုက်တယ်။ 80 kg ကနေ ပြန်ချလိုက်တာ 65kg လောက်ရောက်သွားတယ်။ ပြီး အဆီတွေလဲ ကျန်ခဲ့တာမလို့ ဒုံရင်းပြန်ရောက်သွားလေ့ရှိတတ်တာပါပဲ။ ကြုံဖူးသူတွေ အသိဆုံးဟုတ်။
ဒါ့ကြောင့် သင်ဟာ အတန်အသင့် ပိန်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေက
-ယောင်္ကျားလေးဆို Body fat (11%-13%) ၀န်းကျင် ၊ ဒါ့ထပ်ပိန်လေ ပိုကောင်းလေပေ့ါ။
-မိန်းကလေးဆို Body fat (19%-23%) ၀န်းကျင်၊ ဒါ့ထပ်ပိန်လေပိုကောင်းလေ။
ဒီပမာဏထပ် ၀နေသေးရင် အဆီဆက်ချပါ။ ပြီးရင် လာပြန်ဖတ်လှည့်ပေါ့။
ဘယ်လို လက်တွေ့ကျကျ ထုတင်သင့်သလဲ ???
ဟိုးအပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ရပ်ကွက်ထဲက စကားအရ များများစား၊ တမုန်းစား၊ တစ်လငါးပေါင်လောက်တက်အောင်စားပေါ့။
သူတို့အတွက် တစ်လပြည့်လို့ ပေါင်ချိန်စက်ပေါ်မှာ ၅ပေါင်နဲ့ အထပ် တက်သွားရင် အောင်မြင်တယ်လို့ ယူဆတာကြီးပါပဲ။ ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ ကြွက်သားပြတ်တောက်တဲ့အချိန်မှာ အစားအသောက်ကို ဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ကြည့်ပြီးလုပ်လို့ပါပဲ။ မှန်သင့်သလောက်မှန်ပေမယ့် သူတို့တွေ ယူဆမှုက တစ်ဖက်စွန်းရောက်တယ်လို့ ဆိုရမှာပေ့ါ။ ဘာလို့လဲ။
" အခုရှိတာထပ် ကြွက်သားတက်လာချင်ရင် လိုအပ်တာထပ် ပိုစားရမယ်၊ ဒီလိုလုပ်တာကို Muscle-building state ရောက်အောင် နေတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ "
ဒါပေမယ့် ဒီလိုစားတဲ့အခါ ရပ်ကွက်ထဲကလို့ တွေ့တွေ့သမျှစား၊ ၅ပေါင်တက်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာစားရမလဲ ၊ Protein လား၊ Carbohydrate လား။ ဘယ်လောက် ပမာဏလဲ ဒါတွေသိဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အိမ်ဆောက်နေတဲ့ Construction worker လို့ သတ်မှတ်မယ် ဆိုပါစို့။
အောက်ပါအတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ပုံဖော်ကြည့်ပါ။
ဆောက်လုပ်မယ့် အိမ် = ကြွက်သား အသစ်
အုတ်ချပ် = Protein ကရတဲ့ Amino acids
လက်ခ = Carbohydrate နဲ့ Fat အစားအစာ
အလုပ်သမား = ကြွက်သားတည်ဆောက်အောင် အစားအစာတွေကို ခြေဖျက်၊ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို လိုသလို ပို့ပေးနေတဲ့ ဖြစ်စဉ် (Construction worker လိုပေ့ါ။ အုတ်၊သဲ၊ လက်ခအပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ပေးနေသလိုပါပဲ)
သင်ဟာ အိမ်တစ်လုံးဆောက်မယ်၊ ကြွက်သားအသစ် တည်ဆောက်မယ် ဆိုပါစို့။ သင်ဟာ အလုပ်သမား (သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်စဉ်)ကို လိုအပ်တဲ့ အုတ်ချပ် (Protein ) ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ စပြီး ဆောက်ဖို့ရမယ် မဟုတ်လား။ အုတ်ချပ် ပမာဏနည်းလေ တည်ဆောက်မှု နှေးလေပါပဲ။ Protein စားတာနည်းလေ ကြွက်သားတက်တာ နည်းလေပေါ့။
ဒီလိုပါပဲ။ အလုပ်သမားကို လက်ခပေးတာ နည်းရင်လဲ စိတ်ပါလက်ပါမရှိတတ်သလို သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လက်ခဖြစ်တဲ့ Carbohydrate နဲ့ Fat မစားရင်လဲ ကြွက်သား တည်ဆောက်ဖို့ လွယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ၊ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးပြီး လက်ခကို လိုတာထပ် ပိုဖြတ်တောက်ကြည့်ပါလား။ အလုပ်သမားတွေ ပညာပြလို့ ဆောက်လက်စလေးပါ ပြိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ Carbohydrate နဲ့ Fat ကို စားသောက်တာ မလုံလောက်ကြည့်၊ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှု မရှိတဲ့အပြင် ကြွက်သားတွေကိုပါ အစာအဖြစ် ပြန်ချေလို့ ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ ဘာကို ပြလဲဆိုတော့ လိုအပ်တာထပ် Protein လျှော့စားတာ၊ Carb နဲ့ Fat လျှော့စားတာဟာ ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှုကို မဖြစ်စေဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါဆို ဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ပိုစားရင်ကော။
အုတ်ချပ် (protein) တွေ ပိုပေးမယ်။ ဒါဆိုပိုမြန်မြန်ဆောက်နိုင်မယ်ပေ့ါ။ လက်ခ (Carbs နဲ့ Fat) ပိုပေးမယ်။ ဒါဆို ပိုမြန်မယ်ပေါ့။ ဟုတ်သင့်သလောက် ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဘက်စွန်းရောက်သွားရင်ကော။
အလုပ်သမားဆိုတာ သူလုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏရှိတယ်ဟုတ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာလဲ အလုပ်သမားနဲ့ တူတူပါပဲ။ သူ့မှာ Limit ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားက အုတ်ချပ် ၁၀၀ စီနိုင်တဲ့ သူဆိုရင် အုတ်ချပ် ၁၅၀ ပေးလို့ ၁၅၀ ပိုမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ လက်ခပိုပေးလဲ ( Carbs နဲ့ Fat ပိုစားလဲ ) ဘာမှပိုမထူးပါဘူး။ သူ့လစ်မစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ ထပ်ပြီး အိမ်ဆောက်တာမြန်၊ ကြွက်သားတက်လာတာ မြန်လာအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေ့ါ။
ဒါ့ကြောင့် ရပ်ကွက်ထဲက ပြောသလို တမုန်းစား၊ များများစား၊ ၅ ပေါင်တက်အောင်စား မလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောတာပါ။ Limit တစ်ခုပြည့်သွားရင် ပိုစားတာ မှန်သမျှဟာ ကြွက်သားမဟုတ်ပဲ အဆီဖြစ်သွားမှာပါ၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ Muscular မဖြစ်ပဲ ၀လာတော့တာပဲ မဟုတ်လား။
ဒါဆို ကြွက်သားတက်နိုင်တဲ့ Limit က ဘာလဲ ???
Website ပေါင်းများစွာရှိပေမယ့် အဖြေက တူနေလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ 0.5 ပေါင်၊ တစ်လမှာ2ပေါင် (1kg နည်းနည်း) ကြွက်သားအသစ် တက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါက အခုမှ စအလေးမသူတွေကနေ ၂နှစ်အတွင်း လုပ်သက်ကြာသူတွေ အတွက် ပျမ်းမျှပါ။ ၂နှစ်အထက် ကြာနေသူတွေအတွက်တော့ တစ်လမှာ 0.5 ပေါင်၊ 1 ပေါင်လောက်တက်ရင်ကို တော်လှပါတဲ့။
သင်ဟာ အခုမှ စပြီး ကြွက်သားတင်ချင်တဲ့သူဆိုရင် အလွယ်အနေနဲ့
- ယောင်္ကျားလေးဆို ၂ပေါင်မှ ၃ပေါင်အထိတက်အောင်စား
- မိန်းကလေးဆို ၁ပေါင်မှ ၂ပေါင်အထိတက်အောင်စား
ဆိုပြီး မှတ်နိုင်ပါတယ်။ စားသင့်တဲ့ အစားအစာတွေက
Protein များများ (စားသမျှ အစာရဲ့ 35%)
-- အမဲသား၊ ဆိတ်သား၊ ကြက်သား၊ ၀က်သား အသားစုံ
- ငါး (Fat+ protein)
- နို့ ၊ ပဲနို့(Fat + protein)
- ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ
စားတဲ့အခါ အစားအစာကို ဦးစားပေးစားပါ။ သိပ်ပြီး မစားဖြစ်ဘူးဆိုသူများအတွက်တော့ Protein powder ကို အစားထိုးသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် powder ပဲသောက်မယ်၊ အစားကို မစားဘူး မလုပ်ပါနဲ့။ Protein powder ကို ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ ရသလို့ Page မှာ အားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Chat box ကနေ တစ်ဆင့်မေးနိုင်ပါတယ်။ Delivery ပို့ပေးတယ်ဆိုပါတော့။ တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ လိုက်ပြီး ပမာဏ ဘယ်လောက်သောက်သင့်တယ် အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။
Carbohydrate များများ (စားသမျှရဲ့ 50%)
- ဆန်ဖြူ ၊ ညိုကြမ်း
- ကန်စွန်းရွက်၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ကညွတ်၊ အရွက်စုံ
- ပန်းဂေါ်ဘီ ဖြူစိမ်း ( Protein + Carbohydrate)
- ကန်စွန်းဥ၊ အာလူး
- ငှက်ပျောသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အသီးအနှံ
- ပေါင်မုန့် ညိုကြမ်း
- ဂျုံ ဆန်နဲ့ လုပ်ထားသော အစာ (ခေါက်ဆွဲ စသဖြင့်၊ သိပ်တော့မကောင်း)
(အရွက်တွေက Carbohydrate ပါပေမယ့် Calorie နည်းတာမလို့ များများစားလို့ရပါတယ်)
Fat အလောတော် (စားသမျှရဲ့ 15%)
- မြေပဲစေ့၊ သီဟိုစေ့၊ Almond ၊ Nuts
- ငါး (Protein + fat)
- နို့ (Protein + fat)
- ပေါင်မုန့်နဲ့စားတဲ့ မြေပဲယို peanut butter (Fat+ protein)
Fat ကကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် နည်းနည်းလေးစားရုံနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏပြည့်ဖို့ လွယ်ပါတယ်။ အပေါ်က အထဲမှာ သတိထားရမှာ မြေပဲစေ့၊ သီဟိုစေ့တွေကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်နေ့ခပ်သေးသေး လက်တစ်ဆုပ်လောက်ပဲ သင့်တော်ပါတယ်။ Olive oil၊ Sunflower oil လဲ အလောတော်ပဲ ကောင်းပါတယ်။
ဒါတွေ သိပ်မစားဖြစ်သူတွေအတွက် ငါးကြီးဆီက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်သည်ဖြစ်စေ ငါးကြီးဆီက ကောင်းမွန်ပါတယ်။
အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာ ခဏခဏ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ Diet ဆိုတာမလုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါဆို ဒါပဲ၊ ဒီအချိန်မှာ စားရမယ်ဆိုတာမျိုးက သင့်အတွက် မလုပ်နိုင်ရင် အဆင်မပြေပါဘူး။ Diet plan တစ်ခုဆိုတာ တစ်သက်လုံးစားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဆင်ပြေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး သင်ကြိုက်တာတွေချည်း ပြောင်းပြောင်းပြစ်လို့တော့ ဘယ်ရမလဲ။ အဆင်ပြေအောင် စားပါဆိုပေမယ့် အခြေခံဖြစ်တဲ့ Protein ပမာဏ၊ Carbs နဲ့ Fat တွေတော့ ပါရအုန်းမှာပေ့ါ။ အခြေခံနည်းကိုတော့ လက်ကိုင်ထားရမှာပါ။
အပေါ်ကပြောတဲ့ အချက်တွေအရ သင်သိထားရမှာက စွတ်စပ်စားတိုင်း တက်လာတာ ကြွက်သားမဟုတ်ပါဘူး။ ပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ ကြွက်သားတက်ဖို့ လစ်မစ်ရှိတာမလို့ ယောင်္ကျားလေးဆို ၂ပေါင်မှ ၃ပေါင်အထိတက်အောင်စား မိန်းကလေးဆို ၁ပေါင်မှ ၂ပေါင်အထိတက်အောင်စားပါ။ စားတဲ့အခါ Protein 35% Carbs 50% Fat 15% ပျမ်းမျှပါအောင်စားပါ။
လတစ်ဝက်လောက်မှာ ချိန်ကြည့်ပါ။ ပေါင်ချိန်တဲ့အခါ အချိန်ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားချိန်ပေ့ါ။ နိုးနိုးခြင်း၊ အားကစားလုပ်ပြီးပြီးခြင်း စသဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး ပျမ်းမျှ တန်ဖို့းယူ။ ချိန်ကြည့်လို့ မှန်းတာထပ် များသွားရင် နည်းနည်းပြန်လျှော့၊ လိုနေသေးရင် နည်းနည်းချင်းပိုစား။ ဒါဟာ လက်တွေ့ကျကျနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။
ကဲ အားလုံးပဲ လက်တွေ့ကျကျ ထု အမြန်တင်နိုင်ကြပါစေ။ အောင်မြင်သွားရင်လဲ ပြန်လာကြွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့လို့။
မူရင်းတင်ဆက်သူ - Golden Dreams❤️
Posted by Alex Aung at 9:43 AM
Labels: ၀ိတ်ချနည်းများ, အားကစား, ဆောင်းပါး
Gym ဗဟုသုတ အတိုအထွာ
ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းစိတ်ပညာ (Relationship Conflict ...
OPPO R17 Pro User Experience Review
ထူးကဲသော ကျန်းမာခြင်းအတွက် Full-Body Workout
ချဉ်စပ်ကဏန်းဟင်း - ရတနာရှစ်မျိုး ကောက်ညှင်းပူတင်း ...
ကျောက်မျက်ရတနာ အတု _ အစစ်ခွဲခြားကြည့်ရအောင်
လူငယ်တစ်ယောက်လိုနုပျိုနေတဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ လျှိုဝှက...
Redmi Note7Review: Snapping
စီလုံတီး - ကဏန်းပြောင်းဖူးကော်ရည် Soup - Mud Cake ...
စိတ်မ၀င်စားရင် ထွက်သွားလိုက်ပါ …👉🏻👉
Redmi Note7Camera Review
KPI, KRA and Learning and Development Program
ဖျော်ရည်နှင့် ဖျော်ယမကာ ﻿(Non-alcoholic Beverages ...
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့အတွက် ရေက အကူအညီပေးနိုင်မ...
ကင်​ဆာ​ရောဂါ ကာကွယ်​ဖို့ သ​င်္ဘောသီးဖျော်ရည် သောက်ကြ...
တကယ် အလုပ်ရှုပ် နေတာလား ?
လမ်းသရဲမုန့် - ဘာလီကြက်သားပေါင်း - ကြက်ပေါင်းကော်ရ...